true integrity /zu-ZA/tools-for-life/integrity/steps/good-and-evil.html read 1 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/integrity_zu_ZA.jpg UbuQotho NokweThembeka
Uyemukelwa kwi-Online Course yezobuQotho NokweThembeka
Kungashiwo ukuthi ubuqotho ukwazi nokwenza lokho okwaziyo ukuthi kuyiqiniso futhi nokulungile, yize kukhona okuphambene nalokho. Yini edala ukuthi ulahlekelwe ubuqotho bakho, futhi ngayo, nokuzihlonipha kwakho? Bungatholakala kanjani futhi?
Futhi yini edala ukuthi abantu bahoxe empilweni? Bashiye imisebenzi emihle ebebeyijabulela? Noma bayeke imisebenzi ebikade isho lukhulu kubo? Abantu baziwa ngokubhidliza umshado futhi bahambe ngaphandle kwesizathu esinengqondo. Kuze kube manje, akukaze kube ukuphunyuka enkingeni enkulu kangako.
Umuntu angazizwa kabi ngalokho abekwenzile esikhathini esidlule futhi abonakale engakwazi ukuthola impumuzo. Kepha ukuzisola kokwedlule akudingi ukukususa ekubandakanyeni kwamanje.
U-L. Ron Hubbard uthole ukuthi empeleni yini ebangela abantu ukuba bahlukane emshadweni, emaqenjini, umsebenzi womuntu futhi namaphupho abo ngekusasa elijabulisayo.
I-Scientology iqukethe izinqubo namathuluzi aqondile okwenza umuntu akwazi ukuzikhipha emiphumeleni yezenzo ezimbi ezedlule. Ngala mathuluzi, umuntu angazisiza futhi nalabo abaseduze kwakhe bazizwe beyingxenye yeqembu futhi, abuyise ubuqotho bakhe nokuzihlonipha futhi kumenze akwazi ukuthola futhi ukuqinisa ukwethembana nobungane babanye.
Le khosi izokunikeza ukuqonda okuyisisekelo kwezinkinga eziphathelene nobuqotho kanye nokwethembeka namanye amathuluzi abalulekile ongawasebenzisa ukuzisiza wena noma abanye baphile impilo ejabulisa kakhudlwana.
Okuhle kusho ukwenza izinto ezisizayo, ezakhayo, ezenza izinto zibe ngcono, zenze abantu bajabule, njll. Ububi busho ukwenza izinto ezilimazayo noma ezibangela ubuhlungu obukhulu, ukucasuka, usizi, njll. Kuyinto embi noma engalungile.
Umuntu ngokuyisisekelo ulungile. Uzama ukwenza izinto ezizosiza abanye futhi athuthukise izinto. Akafuni ukuzilimaza yena noma abanye. Lapho umuntu enza abanye abantu kabi, uyozibhubhisa ukuze asindise abantu noma izinto azilimazile.
Kepha kusho ukuthini ukuthi okuthile “kuhle” noma “kubi,” “kulungile” noma “akulungile”? Impendulo ihlobene nokusinda. Ukusinda kusho ukukwazi ukuhlala uphila noma ukuqhubeka nokuphila noma okukhona. Ngaphezu kwalokho, kusho ukuphila isikhathi eside ngangokunokwenzeka futhi ngangokunokwenzeka.
Noma yisiphi isenzo esisiza ukusinda sithathwa njengesihle. Izenzo ezinhle kakhulu yilezo ezinganikeli kumuntu uqobo, kepha emndenini wakhe, eqenjini lakhe, ezintweni ezibonakalayo, esintwini noma empilweni.
Ngaphezu kwalokho, ukuze kube kuhle, ukwakhiwa (usizo noma usizo lokuthuthuka) isenzo esilethayo kumele sibe sikhulu kunencithakalo ebangelayo. Isibonelo, ikhambi elisha lesifo lingaba yikhambi elamukelekayo uma lisindisa izimpilo eziyikhulu nokho libulala eyodwa.
Okuhle futhi ukuthi ulunge kakhulu kunokuba nephutha. Okuhle ukuphumelela kakhulu kunokuthi ungaphumeleli, ngendlela esiza noma ekuthuthukiseni abanye abantu nezinto.
Ububi buphikisana nokuhle. Lapho isenzo (into eyenziwa ngumuntu) sibhubhisa kakhulu kunokwakha, kubi. Uma isenzo sisiza ukunqotshwa (ukwehluleka noma ukufa) ngaphezu kokuba sisiza ukusinda, siyisenzo esibi. Noma yini embi eletha ukubhujiswa kwabantu, amaqembu noma kunciphise ikusasa lesintu.
Sekukonke, ukuziphatha okuhle kungukusinda. Ukuziphatha okubi akukhona ukusinda.
Isenzo noma isiphetho (umbono noma isinqumo umuntu asenzayo) silungile uma sisiza ukusinda komuntu, umndeni, iqembu, iSintu noma impilo esenza isiphetho.
Isenzo noma isiphetho asilungile ngezinga lokuthi akusindisi kumuntu, umndeni, iqembu, Isintu noma impilo. Okubi kakhulu umuntu angaba nakho kufile.
Umuntu noma iqembu, ngokwesilinganiso, elungile kakhulu kunokubi kufanele lisinde. Umuntu noma iqembu, ngokwesilinganiso, elingalungile kakhulu kunelilungile lizokwehla.
Ukuziphatha kokungathembeki akusindisi. Lapho uthi uzokwenza okuthile futhi ukwenze, uyathembeka futhi kungukusinda—kodwa inqobo nje uma wenza lokho okushoyo ukuthi uzokukwenza. Kwababuthakathaka, abangamagwala (abantu abenze ngokungazethembi) kanye nabangenangqondo (abantu abangenangqondo), ukungathembeki, ukulimaza abanye nokucekelwa phansi kwamathemba abo kungabonakala kuwukuphela kwendlela yokuphila.
Abantu benza izinto ezingathembeki noma ezilimazayo ngenxa yokwesaba. Amanga atshelwa ngoba umuntu wesaba ukuthi kuzokwenzekani uma umuntu ekhuluma iqiniso. Ngakho-ke umqambimanga uhlala eyigwala futhi oligwala uhlala engumqambimanga.
Kungahle kubonakale kuyinto evamile futhi ilunge ngokuphelele kwabanye abantu ukuthi bahlala emphakathini ogcwele izidakamizwa, izigebengu, impi nobuhlanya. Lokhu akuyona into ejwayelekile futhi akudingekile. Kungenzeka kubo bonke abantu ukuthi baphile izimpilo ezijabulisayo nezimpumelelo. Kuqala ngokuqonda ngokweqiniso ukuthi yini eyenza okuthile okuhle nokubi, okulungile nokungalungile.